Mawduucyada Dhacdooyinka Ugu Fiican ee WordPress | Martech Zone
Mawduucyada Dhacdooyinka ugu Fiican ee WordPress
Wednesday, April 1, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan isku diyaarineynaa sanad-ururinteena sanadlaha ah ee urur-samaynta cudurka kansarka 'Leukemia & Lymphoma Society' oo leh a Bandhigga Muusikada & Teknolojiyada halkan Indianapolis 26-kii Abriil. Sanadkii la soo dhaafey waxaan ururinay in ka badan $ 30,000 waxaan rajeyneynaa inaan ka adkaan doono sanadkaan.
Sannadkan waxaan go'aansanay inaan dib-u-magacbixinno dhacdada si ay u fududaato xusuusteedu, iyo inaan dejino degel si fiican uga tarjumaya madaddaalada cajiibka ah ee aan haysannay sanadkii hore. Farxaddeenna ku saabsan magac-u-bixinta ayaa si dhakhso leh u joogsatay, in kastoo, sidii aan u tijaabinnay mawduuca WordPress ka dib mawduuca WordPress ee loogu talagalay dhacdooyinka. Si loo dhigo si qumman, way nuugeen uun.
Xaqiiqdii, sida ugu fiican ee loo qiimeeyo dulucda dhacdada boggayaga xiisaha leh ee WordPress-ka ah ayaa dib noo dhigay toddobaadyo sidii aan xitaa u garan kari weynay sida loo dejiyo. Xog la'aanta xogta, dukumiintiyada cabsida leh, iyo taageerada eber ayaa nagu riixday inaan iska dhiibno.
Waxaan helnay nasiib aad u weyn oo aan si daacad ah uga labalabeeyay samaynta mawduuc kale… laakiin waxaan ku degay Showthemes waxaana aad u xiiseynayay bixintooda, iyo sidoo kale diiradooda, mowduucyada dhacdada.
Dhowr saacadood gudahood waxaan ku lahaa goobta si buuxda loogu talagalay on iyaga Mawduuca Fudge oo ay ku badan yihiin iyada oo aan wax arrimo ahi jirin! Xitaa waxay si wanaagsan u xajisatay tikidhada tikidhada 'Eventbrite'!
Mawduucyada dhacdooyinka iyo shirarka sidoo kale waa kuwo jawaaba, samaynta goobtaada munaasabadda ama microsite qurux u leh daalacashada - xitaa shaashadaha yaryar. Waxaan aad u jecel nahay mawduucyada oo aan u qornay sidii ku-xirnaan oo aan ku leenahay xiriiriyeyaasha boostadan oo dhan. Waxaan rajeynaynaa inaad jeceshahay iyaga sidoo kale annaguna waan jecel nahay - oo waxaan ku arki doonnaa Abriil 26keeda munaasabaddayada!
Xusuusin Dhinac: Sannadka dambe, waan hubaa inaannu qaabayn doonno mawduuc cunug oo bixiya calaamado adag… laakiin aad baan ula dhacsanahay mawduuca sidiisaba, sidoo kale!
Tags: dulucda shirkamawduucyada shirkadulucda dhacdadabandhigyomawduuca vertoh
Dambiga iyo Difaaca Jiilka Jiilka
Waxay u egtahay qabow! Waxaan markasta ku dhaaranayaa GeneratePress. Looma jeedin dhacdooyinka laakiin waa shiraac madhan oo quruxsan oo abuuraya nooc kasta oo muuqaal ah oo aad daba socoto.